‘दि भ्वाइस सिजन २’ का बिजेता राम लिम्बुलाई बाजागाजा सहित भब्य स्वागत ! बिजेता भएपछि राम पहिलो पटक मिडियामा – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /Video/‘दि भ्वाइस सिजन २’ का बिजेता राम लिम्बुलाई बाजागाजा सहित भब्य स्वागत ! बिजेता भएपछि राम पहिलो पटक मिडियामा
‘दि भ्वाइस अफ नेपाल’को अन्तिम चारमा सनिष श्रेष्ठ, राम लिम्बु, विकास लिम्बु र आरिफ राउफ पुगेका थिए । अन्तिमस्पधाको प्रस्तुति र दर्शकको भोटिङको आधारमा राम लिम्बु विजेता भएको कार्यक्रममा आयोजकले घोषणा गरेको थियो ।
विजेता लिम्बुले कार, म्यूजिक नेपालबाट एल्बम निकाल्ने अवसर लगायतका विभिन्न पुरस्कार हात पारेका छन् । लिम्बु कोच प्रमोद खरेललको टिममा रहेका थिए । दीप श्रेष्ठ, प्रमोद खरेल, राजु लामा र आस्था राउत निर्णायक रहेको प्रतियोगिताको फाइल हिमालय टिभीबाट प्रत्यक्ष प्रसारण समेत भएको थियो ।
उनि अवार्ड जिते पश्चात पहिलो पटक मिडियामा आएका छन् । यसैबिच राम लिम्बुलाई उनका समर्थकहरुले बाजा गाजा सहित भब्य स्वागत गरेका छन् । अहिले उनलाई बधाई तथा सुभकामना दिनेको ओहिरो लागेको छ । हेरौँ उनलाई गरिएको स्वागत भिडियोमा :